တိုက်ရိုက်-Connect ကို SpO2 အာရုံခံ
က Short SpO2 အာရုံခံ
ပြန်သုံးနိုင်သော SpO2 အာရုံခံ (Ext-cable ကိုလိုအပ်ပါတယ်)
ECG နှာမောင်း Cable ကိုနှင့်ဦးဆောင်လမ်းပြ
Bladderless ပြန်လည်အသုံးပြုနိုင်သွေးဖိအား Cuffs
ESU ခဲတံနှင့် electrosurgery ဘို့ Cable ကိုချိတ်ဆက်ခြင်း
HyLink ECG Cable ကို
ခဲဝါယာကြိုးနှင့်အတူ one-Piece စီးရီး EKG Cable ကို
Product Name:ပြန်သုံးနိုင်သော SpO2 အာရုံခံ (Ext-cable ကိုလိုအပ်ပါတယ်)
Specification:မွေးကင်းစကလေးထုပ်ပိုးပြီးအာရုံခံကိရိယာ (လိုသလိုဖြုတ်တပ်လို့ရတဲ့), 3M
1. Med-link ကို SpO2 အာရုံခံ, ပြည်တွင်းလူသိများတဲ့ဆေးရုံများအားဖြင့် SpO2 တိကျမှန်ကန်မှုကိုလက်တွေ့စမ်းသပ်မှုတွေရှောက်သွားတောင်မှအနိမ့်အသှေးကိုအောက်ဆီဂျင်၏အမှု၌, ထို SpO2 အာရုံခံကိရိယာကိုတိကျစွာတိုင်းတာနိုင်ပါ။
ချွေတာခြင်းနှင့်ကုန်ကျစရိတ်-ထိရောက်သော 2. က Short SpO2 senor အရှည် 0.9M, အခြားကေဘယ်လ်ကြိုးနှင့်အတူအကွေ့အကောက်များသောနှင့်လူနာနှစျသိမျ့ထိခိုက်ရှောင်ရှားဖို့ကုန်ကျစရိတ်, ရေတိုကြိုးတွေလျှော့ချပေးပါတယ်။
3. ကုန်ကျစရိတ်ကိုလျှော့ချ, ထပ်တလဲလဲအသုံးပြုနိုင်သလား။
4. က Short SpO2 အာရုံခံကိရိယာ extension ကို cable ကိုလိုအပ်ပါတယ်။
5. ကုန်ပစ္စည်းများ CFDA, FDA က, အီးအောင်လက်မှတ်များထုတ်ပေးရန်လည်းရရှိမည်ဖြစ်သည်။
6. ထူးထူးအထွေထွေရှိငြားထုတ်ကုန်သတ်မှတ်ချက်များ, မော်နီတာအများစုအမှတ်တံဆိပ်နှင့်အတူလိုက်ဖက်နိုင်။
လူနာနှင့်အတူ 7. SpO2 အာရုံခံကိရိယာအဆက်အသွယ်တိုက်ရိုက်အဆိုပါ biocompatibility စမ်းသပ်အောင်မြင်ပြီး။
image ကို ပုံစံ လိုက်ဖက်တဲ့အမှတ်တံဆိပ်: item ဖော်ပြချက် package အမျိုးအစား
S0020I-L ကို Masimo Tech, MDE:EscortII OPT30:Prism, GE Marquette:Pro1000, V300 , INVIVO:T8 , Schiller: ZOLL , Datascope:Trio, Passport2, * refurbished or repair only. မွေးကင်းစကလေးထုပ်ပိုးပြီးအာရုံခံကိရိယာ (လိုသလိုဖြုတ်တပ်လို့ရတဲ့), 3M 1pcs / အိတ်
S0020D-L ကို Masimo Tech, MDE:EscortII OPT30:Prism, GE Marquette:Pro1000, V300 , INVIVO:T8 , Schiller: ZOLL , Datascope:Trio, Passport2, * refurbished or repair only. အရွယ်ရောက်ပြီးသူဆီလီကွန်အပျော့, လက်ချောင်းစွပ်အိတ်, 3M 1pcs / အိတ်
S0015F-S က Philips က / HP က 78352C, 78354C, 78834C, M1020A, M1025B, M1025A, M1350B, M1772A / B, M1732A / B, M2475B M3, M4, MP20, MP30, MP40, MP50, MP70, MP80, VM4, VM6, VM8 မွေးကင်းစကလေးထုပ်ပိုးပြီးအာရုံခံကိရိယာ (undetachable), 1M, S0015PH-L, Standard လိုအပ်: M1193A 1pcs / အိတ်
S0026P-S က GE က Marquette: Dash2500 / Dash 3000 / 4000/5000 နေရောင်ခြည် 8000 / 8000M ဈ / 9500 (ဓါတ်ရထား 451N5 / 851N5) Corometrics 250 (GE-Oxi နည်းပညာ); Mindray: pm တွင်-7000, PM- 8000series, PM- 9000series, VS-800 (Oxi နည်းပညာ); အားလုံး Nellcor & Nellcor တပ်ဆင်ထား OEM မော်နီတာ ကလေးဆီလီကွန်, 1M, 9pins 1PCS / Bag
S0026I-S က GE က Marquette: Dash2500 / Dash 3000 / 4000/5000 နေရောင်ခြည် 8000 / 8000M ဈ / 9500 (ဓါတ်ရထား 451N5 / 851N5) Corometrics 250 (GE-Oxi နည်းပညာ); Mindray: pm တွင်-7000, PM- 8000series, PM- 9000series, VS-800 (Oxi နည်းပညာ); အားလုံး Nellcor & Nellcor တပ်ဆင်ထား OEM မော်နီတာ မွေးကင်းစကလေးထုပ်ပိုးပြီးအာရုံခံကိရိယာ (လိုသလိုဖြုတ်တပ်လို့ရတဲ့), 1M, 9pins 1PCS / Bag
S0015I-S က Goldway: UT6000A, G3 (Philips က Tech မှ); Philips က: M3, M4, MP20, MP30, MP40, MP50, MP70, MP80, VM4, VM6, VM8 မွေးကင်းစကလေးထုပ်ပိုးပြီးအာရုံခံကိရိယာ (လိုသလိုဖြုတ်တပ်လို့ရတဲ့), ပစ္စည်း: TPU; connector: 8 တံသင်; အရှည်: 1M 1pc / Bag
S0010F-S က NELLCOR, Datascope: Accutorr Plus အား, Expert, နိုင်ငံကူးလက်မှတ်; Dräger: cicero, Narkomed, Vitalert 1000 GEMS: Corometrics / Critikon, Compact, Dinamap ကို Select လုပ်ပါ, MPS, Oxyshuttle, Pro ကို 300/400 (Non-OxiMax ®); GEMS, Philips က, CMS သို့ , Merlin စနစ်များ, Sirem SpO2 Module; Spacelabs: မွေးကင်းစကလေးထုပ်ပိုးပြီး, 1M (undetachable), အပြာရောင်, TPU, 0,0422 ကီလိုဂရမ်, Standard: D-YS 1PCS / Bag
S0005B-S က Nihon KOHDEN ရာဘေး Monitor: BSM-4101,4103, 4111,4113 ဘဝနယ်ပယ် P ကို, BSM-5105,5135 ဘဝအတိုင်းအတာတစ်ခု, BSM-2351,2353 ဘဝနယ်ပယ် L ကို, BSM-2301,2303 ဘဝနယ်ပယ်ငါ BSM-73 လက်ချောင်းကလစ်; အရွယ်ရောက်ပြီးသူ, 1 မိ; 0,065 ကီလိုဂရမ်; cool Grey က; ပစ္စည်း: TPU; 1PCS / Bag
S0015D-S က ဖိလိပ္ပုက: M3, M4, MP20, MP30, MP40, MP50, MP70, MP80, VM4, VM6, VM8 ဆီလီကွန်; အရွယ်ရောက်ပြီးသူ, 1.6m; 0.06KG; အပြာရောင်; ပစ္စည်း: ဆီလီကွန်ဒိုင်အောက်ဆိုက် 1PCS / Bag
S0190D-S က GE က MEDICAL: e- နှင့်အတူ /3AS CARESCAPE * modular မော်နီတာနှင့် S / 5, CS /3modular မော်နီတာ (P), RESTN သို့မဟုတ် EPSM (P), module တွေ။ TruSignal * option ကိုတုံ့ပြန်သူ, B20 နှင့် B30 မော်နီတာနှင့်အတူ CARESCAPE V100 ဆီလီကွန်အပျော့; အရွယ်ရောက်ပြီးသူ, 1 မိ; 0.045KG; cool Grey က; ပစ္စည်း: TPU 1PCS / Bag
S0080B-S က NONIN: 8500,8600,8700,8800 လက်ချောင်းကလစ်; အရွယ်ရောက်; 1 မိ; 0.05KG; cool Grey က; ပစ္စည်း: TPU 1PCS / Bag
S0076D-S က BCI: 3401,3304,3303,3302,3301,3300; Spacelabs Burdick: PRO2; Dräger: Dräger Oxipac 2000; ရှေးခယျြမှုအီလက်ထရောနစ်: MD300M ပစ္စည်း: ဆီလီကွန်ဒိုင်အောက်ဆိုက်, 9pins; အရှည်: 1 မီတာ; အလေးချိန်: 0.045KG; အရောင်: အပြာရောင် 1PCS / Bag
S0076B-S က BCI: 3401,3304,3303,3302,3301,3300; Spacelabs Burdick: PRO2; Dräger: Dräger Oxipac 2000; ရှေးခယျြမှုအီလက်ထရောနစ်: MD300M ပစ္စည်း: TPU; 9pins; အရှည်: 1 မီတာ; အလေးချိန်: 0.0648KG; အရောင်: Grey က Cool 1PCS / Bag
S0044D-S က CSI Alaris (IVAC): VitalCheck 4400, CSI (Criticare စနစ်များနိုင်ငံတကာ): 503DX, 503Spot, 504DX, 506,506DX, 507ELC2 ScholarIII, 8100Poet Plus အား, 507ELC2 ScholarIII, 8100Poet Plus အား, 507ELC2 ScholarIII, 8100Poet Plus အား, ပစ္စည်း: ဆီလီကွန်ဒိုင်အောက်ဆိုက်, 6pins; အရှည်: 1 မီတာ; အလေးချိန်: 0.065KG; အရောင်: အပြာရောင်; 1PCS / Bag
S0044B-S က CSI Alaris (IVAC): VitalCheck 4400, CSI (Criticare စနစ်များနိုင်ငံတကာ): 503DX, 503Spot, 504DX, 506,506DX, 507ELC2 ScholarIII, 8100Poet Plus အား, 507ELC2 ScholarIII, 8100Poet Plus အား, 507ELC2 ScholarIII, 8100Poet Plus အား, ပစ္စည်း: ဆီလီကွန်ဒိုင်အောက်ဆိုက်, 6pins; အရှည်: 1 မီတာ; အလေးချိန်: 0.0546KG; အရောင်: အပြာရောင် 1PCS / Bag
ယခင်: ETC02 အာရုံခံ Connector စီးရီး
နောက်တစ်ခု: micro Capnometer
တိုက်ရိုက် Connect ကို Spo2 အာရုံခံ
Nellcor Oximax Spo2 အာရုံခံ
မွေးကင်းစကလေး Spo2 အာရုံခံ
ကလေး Spo2 အာရုံခံ
သွေးခုန်နှုန်း Oximeter Spo2 အာရုံခံ
Spo2 Finger Clip အာရုံခံ
Spo2 အာရုံခံတိုးချဲ့မှု Cable ကို
"One-LINE" စီးရီး ECG ခဲဝါယာကြိုး
© Copyright - 2010-2019 ရှန်ကျန်း Med-link ကိုအီလက်ထရောနစ်နည်းပညာ Co. , Ltd: အားလုံးအခွင့်အရေး။ 粤ICP备07051280号-2